(Waxaa laga soo toosiyay Suxufi Muuse)
Dhinaca kale, dadka Hebrewga ahi waxay Nebi Muuse ugu yeedhaan (מֹשֶׁה רַבֵּנו)ּ "Muuse macalinkayagii" iyo "Muuse kii wax na baray". Waxa uuna yahay nebiga ugu muhiimsan ee aasaaska iyo saldhiga u ah diinta Yehuudaka. Sidoo kale, Nebi Muuse waa tiir muhiim u ah diimaha Islaamka iyo Masiixiga. Nebi Muuse wuxuu ku dhashay deegaanka Gooshen ee dalka Masar, wuxuuna ku dhintey buurta Neebo ee deegaanada Macoow. Intaasi waxaa dheer, Muuse waxaa dhalay oo aabe u ah Cimraan, waxaana hooyo u ah Jojebed (Jochebed), wuxuuna ka tirsan yahay Qoyska Cimraan asagoo walaal la ah Nebi Haaruun iyo gabadha Miryama.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Towraad&oldid=166523"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 16 Febraayo 2017, marka ee eheed 12:14.